Umfundi owenza izifundo ze-PhD, uMnu u-Nicholas Rono, nomfundi we-MSc, uNKs uLatifa Bashar Hamed Abdalla - akade befunda e-Algeria ngenkathi kubheduka i-COVID-19 - bakhethe ukuthi basale sebelinda ngakhona.
Emizamweni ye-UKZN yokunika abafundi ithuba lemfundo ephelele, iNyuvesi inika abafundi nothisha ithuba lokuyofunda phesheya bayofunda noma bayocwaninga kwamanye amanyuvesi isikhathi esithile.
Ubhubhane i-COVID-19 lusho ukuthi abafundi abaningi sebebuyile eNingizimu Afrika, nakuba abanye njengo-Rono no-Abdalla bekhethe ukuhlala lapho bekhona.
U-Rono, ose-University of Abou Bekr Belkaïd, edume ngokuthi yi-University of Tlemcen, uthe amathuba okungenwa i-coronavirus makhulu ngenkathi esendleleni yikona obekumkhathaza kakhulu, yingakho ekhethe ukuthi avele alinde kuze kudamuke ubhubhane e-Algeria, nayo eyizwe elivele lisemgonqweni.
Izinselelo lo mfundi weKhemistri, ogxile kuma-optoelectronic nanomaterials (okwenza amandla kagesi onge imvelo) abhekene nazo ukungabi khona kwe-inthanethi, ukungakwazi ukwenza nokuthenga izinto ezithile ezitolo, nokungakwazi ukubonana ubuso nobuso nomeluleki wakhe wocwaningo.
Amandla nethemba ukuthola ngokuthandaza uNkulunkulu nokuthi uhulumeni uzenzile izindlela zokunqanda ukubhebhetheka kwegciwane. U-Rono ukhululwa ukuthi eminye imibiko iveza ukuthi abanye abaphethwe i-COVID-19 bayelulama.
Uxhumana nabakubo abaseKenya ngocingo noma ngamavidiyo ka-WhatsApp kodwa uthi i-inthanethi ibuye icikizele. Umagange ukuqhubeka nocwaningo lwakhe uma isimo sesingcono.
Uhambo luka-Rono luxhaswe umsebenzi wemifundaze we-ACADEMY, edidiyela ukuhamba kwabasebenzi nabafundi asebeneziqu emanyuvesi akhona ohlelweni.
U-Abdalla wenza iziqu zeMastazi kwezeSayensi kwi-Applied Mathematics (i-Biomathematics) e-University of Tlemcen ngokohlelo lwe-ACADEMY.
Evumelana no-Rono, uthe naye ubekhathazwa ukuhamba, wanquma ukuhlala e-Algeria, nakuba ubengathanda ukuba sekhaya nabakubo. ‘Kuyinselelo enkulu kuze kube manje ngoba asazi ukuthi senzenjani, izinto eziningi azikho ezandleni zethu.’
U-Abdalla uthe ukhathazeke ngempilo yakhe nezinye izinto. Ukuhlangana nomeluleki wakhe wocwaningo kusamisiwe kanti kukhona inkinga yobuhixihixi be-inthanethi. Ukhuthazwa imizamo kahulumeni wase-Algeria ukunqanda igciwane nokholo lwakhe. ‘Ngikholelwa emthandazweni kuNkulunkulu ukuthi asivikele sonke,' kwengeza yena.